Complete Network Guide (မြန်မာလို) ~ Zawlin IT World
12:05 AM မြန်မာလိုနည်းပညာစာအုပ်များ No comments
Networking အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာချင်တဲ့သူများ၊ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူများ အတွက်ကတော့ တန်ဖိုးဖြတ်မရတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ. ဆရာ ဦးဇော်လင်း ရေးထားတာပါ. networking နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိသင့်တာနှင့် လက်တွေ့အသုံးချပုံတွေကို အသေးစိတ်ကျကျ ရှင်းပြထားပါတယ်. မ၀ယ်နိုင်သူများနှင့်
နယ်ဝေးရောက်နေတဲ့ သူများအတွက် အဆင်ပြေနိုင် လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်.